Ivotoerana SAFIDY Afa-po amin`ny taham-pahavitrin`ny mpifidy
Nanao fanambarana mahakasika ny fanaraha-maso ny fifidianana ny Ivotoerana SAFIDY na Sampana Anaraha-maso ny Fifidianana, Ivon’ny Demokrasia Ifarimbonanana.
Raha ny tatitra voaray, biraom-pifidianana miisa 9.350 ao amin’ny faritra enina (6) amin’ny 24.852 biraom-pifidianana dia nahitàna mpanara-maso ny fifidianana avy amin’ny SAFIDY miisa 7.032 nandritry ny androm-pifidianana. Nifantoka tamina teboka dimy (5) ny tatitra nomen`ity ivotoerana fanaraha-maso ity. Voalohany, mahakasika ny taham-pifidianana izay ny olom-pirenena no nifidy hatramin`ny 12 ora. Faharoa, 92% ny biraom-pifidianana no nahitana delegen’ny kandidà. Manaraka izany, 39% ny biraom-pifidianana no nahitana mpanara-maso nasionaly sy iraisam-pirenena ankoatran’ny SAFIDY. Amin’ny ankapobeny, ny 98% ny biraom-pifidianana dia tsy nahitana sakantsakana. Teboka farany, ny 15% n` ny biraom-pifidianana izay nahitana tsy fahampian’ireo fitaovam-pifidianana teo am-panombohana dia efa nahazo izany. Amin’ny ankapobeny dia nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana, na izany aza dia nahitana tsy fahatomombanana teo amin’ny lisi-pifidianana sy ny karam-pifidianana teny amin’ireo biraom-pifidianana 547 nanaovan’ny SAFIDY fanaraha-maso. Nisy ihany koa ny biraom-pifidianana nikatona mialohan’ny fotoana, izay narahin’ny CENI maso manokana, izay nanairana ny CENI. Mbola manohy ny fampitana ny tatitra momba ny fizotran’ny fifidianana ireo mpanara-maso eny an-toerana. Hisy tatitra mialoha mikasika ny fanaraha-maso notontosan’ireo mpanara-maso rehetra ireo izay hozaraina ny 09 novambra ho avy izao ato amin’ny foiben’ny SAFIDY. Afaka manambara izahay, hoy ny SAFIDY fa afa-po satria niasa mavitrika mba nahafahan’ny mpifidy maro nanao ny adidiny tao anatin’ny fitoniana, ary koa nihezaka araka izay tratranay mba hahatonga ireo dingana amin’ny fifidianana ho mangaraharaha sy tsy mitanila.